Jeremiya 49 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Uprofita pamusoro peAmoni (1-6)
Uprofita pamusoro peEdhomu (7-22)
Hapazovi nerudzi rwevaEdhomu (17, 18)
Uprofita pamusoro peDhamasiko (23-27)
Uprofita pamusoro peKedhari neHazori (28-33)
Uprofita pamusoro peEramu (34-39)
49 Zvanzi naJehovha pamusoro pevaAmoni:+ “Israeri haana vanakomana here? Haana mugari wenhaka here? Nei Marikamu+ atora nyika yaGadhi?+ Uye nei vanhu vake vachigara mumaguta aIsraeri?” 2 “‘Saka inzwai! mazuva achasvika,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Andichaita kuti panzwike chiratidzo chehondo chekurwisa* Rabha+ yevaAmoni.+ Ichasara yangova murwi wematongo,Uye maguta madiki akaipoteredza achapiswa nemoto.’ ‘Uye Israeri achatora vaya vakamutorera nyika yake,’+ anodaro Jehovha. 3 ‘Ridza mhere, haiwa iwe Heshbhoni, nekuti Ai yaparadzwa! Shevedzerai, haiwa imi maguta madiki akapoteredza Rabha. Pfekai masaga. Ridzai mhere mufambe-fambe pamatanga akavakwa nematombo,*Nekuti Marikamu achatapwaPamwe chete nevapristi vake nemachinda ake.+ 4 Unodadirei nemapani,Nebani rako rinoyerera,* haiwa iwe mwanasikana asina kutendeka,Anovimba nepfuma yakeUye anoti: “Ndiani achauya kuzondirwisa?”’” 5 “‘Ndiri kukuunzira chinhu chinotyisa,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe, Jehovha wemauto,‘Chichibva kune vaya vese vakakupoteredza. Muchaparadzirwa muchienda kwese kwese,Uye hapana achaunganidza vaya vanotiza.’” 6 “‘Asi pashure paizvozvo ndichaunganidza nhapwa dzevaAmoni,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.” 7 Zvanzi naJehovha wemauto pamusoro peEdhomu: “MuTemani+ hamusisina kana uchenjeri here? Mazano akanaka aparara here kune vaya vanonzwisisa? Uchenjeri hwavo hwaora here? 8 Tizai, tendeukai mudzoke! Endai munogara munzvimbo dzakadzika, haiwa imi vagari vemuDhedhani!+ Nekuti ndichaunza dambudziko pana Isau,Pachasvika nguva yekuti ndifunge nezvake. 9 Kana vanotanha mazambiringa vakapinda mauri,Havasiyi mamwe kuti azonhongwa here? Kudai mbavha dzaizouya usiku,Dzaizongoparadza kusvika padzinoda chete.+ 10 Asi ini ndichasiya Isau asina chinhu. Ndichaita kuti nzvimbo dzake dzaanohwanda dzive pachena,Kuti atadze kuhwanda. Vana vake nehama dzake nevavakidzani vake vachaparadzwa vese,+Uye iye achange asisipo.+ 11 Siya nherera dzako,Uye ndichadzichengeta kuti dzirege kufa,Uye chirikadzi dzako dzichavimba neni.” 12 Nekuti zvanzi naJehovha: “Inzwa! Kana vaya vasina kupiwa mutongo wekuti vanwe kapu yacho vachifanira kuinwa, iwe ungasiyiwa usina kutomborangwa here? Hauzosiyiwi usina kurangwa, nekuti unofanira kuinwa.”+ 13 “Nekuti ndapika neni pachangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “kuti Bhozra ichava chinhu chinotyisa,+ chinhu chinoshorwa, chinhu chakaparadzwa uye chinhu chakatukwa; uye maguta ayo ese achagara ari matongo.”+ 14 Pane shoko randanzwa kuna Jehovha,Pane nhume yatumwa kumarudzi kuti inoti: “Unganai muuye kuzomurwisa;Gadzirirai hondo.”+ 15 “Nekuti inzwa! Ndaita kuti usave chinhu pakati pemarudzi,Munhu anozvidzwa pavanhu.+ 16 Kudederesa vanhu kwawakaita kwakunyengera,Naiko kuzvikudza kwemwoyo wako,Haiwa iwe anogara mumikaha yedombo,Anogara muchikomo chakareba kupfuura zvimwe. Kunyange zvazvo uchivaka dendere rako pakakwirira sezvinoita gondo,Ndichakuburutsa kubva ipapo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 17 “Uye Edhomu ichava chinhu chinotyisa.+ Munhu wese anenge achipfuura nepairi acharamba akatarisa achitya, uye acharidza muridzo nekuda kwematambudziko ayo ese. 18 Sezvakaitika pakaparadzwa Sodhomu neGomora nemaguta aiva pedyo,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “hapana munhu achagara imomo uye hapana murume achagara mairi.+ 19 “Pane munhu achauya kuzorwisa mafuro akachengeteka seshumba+ iri kubuda mumabvokocho esango ari pedyo naJodhani, asi pasina nguva ndichaita kuti atize achibva maari. Uye ndichagadza uya akasarudzwa kuti amutungamirire. Nekuti ndiani akaita seni, uye ndiani angamirisana neni? Mufudzi upi angamira pamberi pangu?+ 20 Saka imi vanhu inzwai zvasarudzwa naJehovha pamusoro peEdhomu, uye pfungwa dzaafungira vagari vemuTemani:+ Chokwadi vana vemakwai vachazvuzvurudzwa. Achaita kuti nzvimbo yavo yavanogara ive dongo nemhaka yavo.+ 21 Mutsindo wekudonha kwavo waita kuti nyika idengenyeke. Pane kushevedzera! Kushevedzera kwanzwika kuGungwa Dzvuku chaiko.+ 22 Achakwira mudenga odzika nekukurumidza sezvinoita gondo,+Uye achatambanudza mapapiro ake paBhozra.+ Zuva iroro mwoyo yevarwi veEdhomuIchaita semwoyo wemukadzi ari kusununguka.” 23 Pamusoro peDhamasiko:+ “Hamati+ neApadhi zvanyadziswa,Nekuti zvanzwa mashoko akaipa. Zvapera nekutya. Mugungwa mune kunetseka kusingagoni kudzikamiswa. 24 Dhamasiko haisisina ushingi. Yatendeuka kuti itize, asi yabatwa nekutya kukuru. Yabatwa nekutambudzika nemarwadzo,Semukadzi ari kusununguka. 25 Nei guta rairumbidzwa risina kusiyiwa,Iro guta rekupembera nemufaro? 26 Nekuti majaya aro achawira mumisika yaro,Uye varwi vese vachaparara zuva iroro,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto. 27 “Ndichatungidza rusvingo rweDhamasiko nemoto,Uyo uchaparadza shongwe dzaBheni-hadhadhi dzakavakwa zvakasimba.”+ 28 Zvanzi naJehovha pamusoro peKedhari+ neumambo hweHazori hwakarwiswa naMambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi: “Simukai, endai kuKedhariMuparadze vanakomana vekuMabvazuva. 29 Matende avo nezvipfuwo zvavo zvichatorwa,Machira avo ematende nezvinhu zvavo zvese. Ngamera dzavo dzichatorwa,Uye vachashevedzera kwavari vachiti, ‘Kwese kwese kuri kutyisa zvikuru!’” 30 “Tizai, endai kure! Endai munogara munzvimbo dzakadzika, haiwa imi vagari vemuHazori,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Nekuti Mambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi akufungirai zano rekuti akurwisei,Uye akurongerai kuti akurwisei.” 31 “Simukai, endai munorwisa rudzi rwakagara murunyararo,Ruri kugara rusina chekutya!” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Haruna masuo kana mazariro;* vanogara kwavo vega. 32 Ngamera dzavo dzichatorwa nechisimba,Uye zvipfuwo zvavo zvizhinji zvichapambwa. Vaya vanodimburira bvudzi ravo repamberi penzeve,+Ndichavaparadzira kumhepo yese,*Uye ndichaunza dambudziko ravo richibva kumativi ese,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 33 “Hazori ichava nzvimbo inogara hunguhwe,*Ichava dongo nekusingaperi. Hapana achagara imomo,Uye hapana murume achagara mairi.” 34 Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kumuprofita Jeremiya pamusoro peEramu+ panguva yakatanga kutonga Mambo Zedhekiya+ weJudha: 35 “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Ndiri kutyora uta hweEramu,+ ipo panobva* simba ravo. 36 Ndichaunza mhepo ina paEramu dzichibva kumigumo mina yedenga, uye ndichavaparadzira kumhepo dzese idzi. Hapana rudzi rusingazovi nevanhu vekuEramu vakapararira.’” 37 “Ndichaparadza vaEramu pamberi pevavengi vavo uye pamberi pevaya vari kutsvaga kuvauraya;* uye ndichavaunzira dambudziko, iko kutsamwa kwangu kukuru,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Uye ndichatuma bakatwa kuti rivatevere kusvikira ndavaparadza vese.” 38 “Ndichaisa chigaro changu cheumambo muEramu,+ uye ndichaparadza mambo nemachinda ndiri imomo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 39 “Asi mumazuva ekupedzisira ndichaunganidza nhapwa dzekuEramu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ruzha rwekushevedzera zvinotyisa pakurwisa.”
^ Kana kuti “pamatanga emakwai.”
^ Kana kuti “rakaorera.”
^ Kana kuti “kumativi ese.”
^ ChiHeb., “panotangira.”